विनय तामाङलाई निरज जिम्बाले दिए जवाब : सोधे- विनय तामाङको चारवटी स्वास्नी छन्, व्यक्तिगत कुरा झिकेर नानीहरूसित किन बद्ला लिइरहेछ? - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsविनय तामाङलाई निरज जिम्बाले दिए जवाब : सोधे- विनय तामाङको चारवटी स्वास्नी छन्, व्यक्तिगत कुरा झिकेर नानीहरूसित किन बद्ला लिइरहेछ?
विनय तामाङलाई निरज जिम्बाले दिए जवाब : सोधे- विनय तामाङको चारवटी स्वास्नी छन्, व्यक्तिगत कुरा झिकेर नानीहरूसित किन बद्ला लिइरहेछ?
July 15, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, खरसाङ, मुख्य समाचार 0
केही दिनअघि मात्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले धारावाहिक जनसभा गरेर गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चालाई गाली गऱ्यो। लगत्तै गोरामुमोले गालीको जवाब गालीबाटै फर्कायो। गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बा विनय तामाङप्रति जमेरै खनिए।
यता आफ्नो दललाई लाग्ने गरेका आरोपहरूको जवाब पनि दिए। आन्दोलनकालमा गोरामुमोले सरकारलाई कुटनैतिक चिट्ठी लेखेको तर गोजमुमोले जस्तो चिट्ठी लेखेर सरकारको चाप्लुसी नगरेको बताए।
‘जीएमसीसीमा बिनयको नौटङ्की थियो। बिनय तामाङलेले नै आन्दोलन उग्र गराएका हुन्। गोरामुमो र जापलाई पनि उस्काउने बिनय तामाङ नै हुन्,’ उनले भने, ‘विमललाई गद्दारी गर्ने बिनय हुन्। उनको खूनमा नै गद्दारी छ।’
विनय तामाङले आफूलाई बारम्बार आरटीआई गर्ने सुझाव दिइरहेको सन्दर्भ पनि जिम्बाले झिके। ‘मैले त पिन्टेल भिलेज र दिल्लीको जमीनको विषयमा आरटीआई गरिसकेको छु,’ उनले भने, तर बिनय र अनितमा गोर्खा खून छ कि छैन? गोर्खाको माया छ कि छैन, यसको पनि आरटीआई गर्नुपर्ला।’
विनय तामाङलाई आफ्नै अध्यक्षलाई डाँडा कटाउने गद्दार त भने नै जिम्बाले विनय तामाङलाई जाति बेच्ने दलालीसमेत भने। जाति बेच्ने विनय तामाङसित पोलिटिकल डिल होइन डिलिङ गर्ने गर्छौं,’ उनले भने।
लीला गुरुङको सन्दर्भ
जिम्बाले विनय तामाङ बारम्बार ओह्रालो लागिरहेको भन्दै ‘ओराली लागेको हिरणको चाल भो, छल गऱ्यो जनताले’ गीत गाएर सुनाए। तामाङले बङ्गाल सरकारको कोटा खाएर ठूल्ठूलो कुरा गरिरहेको बताए।
उनले आफ्नो अधिकारको निम्ति लडिरहेका लीला गुरुङजस्तो शिक्षकलाई सरुवा गर्नु पनि विनय तामाङको राजनीति ओह्रालो लाग्नुको उदाहरण रहेको पनि उनले बताए।
सोसल मिडियामा नकरात्मक कमेन्ट गर्नेबारे मोर्चाको आक्रोस बढिरहेको अनि नकरात्मक कुरा गर्ने र लेख्नेहरूमाथि इख बोकिरहेको भन्दै जिम्बाले भने, ‘जाति बेच्नेले सकरात्मक टिप्पणीको आशा पनि कसरी गर्न सकेको?’
विनय तामाङले भाजपालाई गोर्खाल्याण्ड दिएन भनेर नसघाउने भनिरहेको तर गोर्खाल्याण्ड दिने पार्टी को हो त्योबारे मौन रहेको पनि बताए। उनले आफ्नो दलले इमान्दारसित छैटौं अनुसूचीको कुरा गरिरहेको तर विनय तामाङसित त मुद्दा समेत नरहेको पनि बताए।
‘जतिखेर सारा जनता गोर्खाल्याण्डको पक्षमा लडिरहेका थिए, उतिखेर हामीले पनि छैटौं अनुसूचि एक्सपायर भएको क्याप्सुल भनेर जनसपनालाई कदर गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तर विनय तामाङले आन्गोलन र जाति बेचे। छैटौं अनुसूची त्यसकारण पनि सञ्जीवनी बूटी हो जुन कहिले पनि एक्सपायर हुँदैन।’
छैटौं अनुसूचीभन्दा माथिको व्यवस्था सम्भव नरहेको बताउँदै उनले आफूहरू आफ्नो मुद्दामा अडिग रहेको तर विनय तामाङ र अनित थापा चेन लगाएको कुकुर रहेको उनले बताए।
‘सीके प्रधान हत्याकाण्ड विषयमा सीबीआई जाँच गराउने कुराको स्वागत गर्छौं तर प्रथमपटक सीबीआई जाँचको माग सुवास घिसिङले गरेका हुन्। सीबीआई जाँच नै गराउने भए विनय तामाङले 2017 को आन्दोलनमा शहीद भएका 12 जनाको हत्याबारे सीबीआई जाँच गरुन्,’ उनले भने, तर तामाङले यसो गर्न सक्तैनन्। उनले त उनीहरू पुलिसको गोलीले मरेको होइन भनी भनिसकेका चन्। कतै गोली उनकैपट्टिबाट त चलेको होइन?’
विनय तामाङको चारवटी स्वास्नी
उनले विनय तामाङले विमल गुरुङको पोल खोलिरहेको सन्दर्भ पनि झिके। ‘विमल गुरुङले महिलामाथि शारिरिक शोषण गऱ्यो भन्दैछन् तर विनय तामाङको पनि तीनजना स्वास्नी हो। अन्तिम त जीएलपी बिहे गरेको,’ उनले भने, ‘अझ एकजना ,3माइलको छेत्रीनी लगाएर त चारजना भयो, तामाङले किन आफ्नो गलामा पासो हालेको होला?’
उनले विमल गुरुङ र रोशन गिरीको आफू पनि विरोध गर्ने गरेको तर तामाङले त व्यक्तिगत कुरा झिकेर नानीहरुसितसमेत किन बद्ला किन लिइरहेका पनि बताए। बङ्गालको पैसाले तामाङको फुरफुर धेरै बढेकोसमेत उनले बताए।
‘बिनय मोसाई हाम्रो झण्डा बङ्गालको पैसाले फर्फराउँदैन, कन्ट्याकटरको कमिशनको पैसाले पनि फर्फराउँदैन, हामी त जनतालाई शिरमा राख्छौं,’ उनले भने।
खरसाङमा गोरामुमो समर्थित श्रमिक सङ्गठन हिमालयन प्लान्टेशन वर्कर्स युनियन (एचपीडब्ल्युयु)ले श्रमिकहरुको हितमा ऱ्याली निकालेको थियो। ऱ्यालीपछि भएको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै जिम्बाले विनय तामाङलाई गाली गरेका हुन्।
एचपीडब्ल्युयुको केन्द्रीय कार्यकारी सभापति जेबी तामानले आफ्नो लामो सम्बोधनमा जोइन्ट फोरमको निर्देशन अनुसार श्रमिकहरुको दैनिक हाजिरा, ग्य्रजुएटी, निम्नत्तम रोजगार अधिनियम लगायत चियाबारीहरू र चिया श्रमिकहरुको हितमा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिए।
गोरामुमोको वरिष्ठ सदस्य पीसी अग्रवाल, गोरामुमो खरसाङको सभापति निमा लामाले पनि सम्बोधन गरेका थिए।